Tilmaame si aad cagahaaga ugu diyaargarowdo xagaaga | Ragga Stylish
Wax macno ah ma leh haddii aad ka badan tahay kabo daboolan ama aan daboolnayn, kaalay xagaaga sawirkaaga iyo raaxadaadu si aad ah ayey u fiicnaan doonaan ka dib cagahaaga ku-hagaaji.
Maaha wax ku saabsan helitaanka cagaha oo jilicsan, laakiin ku saabsan ee aan ku dhicin jirka intiisa kale. Kadib daaweyn qaas ah, xoogaa dayactir ah iyo maalgashi alaabooyin ilaalin ah (haddii loo baahdo), cagahaagu waxay diyaar u noqon doonaan kabaha xagaaga. Halkan waxaan kugu hageynaa talaabo talaabo ah:
Tallaabada ugu horreysa waa in laga saaro maqaarka dhintay, taas oo ay lagama maarmaan u tahay lugahaaga ku qoy biyo diiran illaa 15 daqiiqo. Ujeeddada ayaa ah in wax kasta oo haray la jilciyo si ay ugu fududaato in looga takhaluso maacuunta sida dhagxaanta dhagxaanta, isbuunyo fuuq-baxa (ama sonkor inta ay maqan tahay) iyo waxyaabaha la jaro. Haddii aad leedahay wicitaanno adag iyo galley, tixgeli daaweyn gaar ah oo gaar ah. Qalliinka ku celi 7dii ama 15kii maalmoodba mar, iyadoo kuxiran heerka cagahaagu ka xumaanayo.
Hadaadan wali sameyn, xagaaga waa xilli fiican oo lagu daro kareem cag ah qalabkaaga nadaafadda. Si joogto ah u isticmaal, adoo xoogga saaraya meelaha ugu qalalan. Ka dib markii si habboon loo nadiifiyo loona qoyo, cagahaagu waxay diyaar u noqon doonaan kabaha xagaaga. Haddii aad go'aansato inaad timaha ka bixiso, waxaa ugu wanaagsan inaad la sii socoto jirka intiisa kale, in kasta oo ay ku xiran tahay doorashada mid walba.
Markii la xidho sharabaaddo la'aan, kabaha qaarkood waxay sababi karaan dhaawacyo cagta ah. Xusuusnow in balastarayaashu u muuqdaan kuwo duudduuban oo xoqmaya markay soconayaan, sidaa darteed waxaa ugu wanaagsan in la maalgashado daawooyinka difaaca ee sida gaarka ah loogu talagalay cagaha. Ulaha ka hortagga cunista waxaa loo isticmaali karaa meel kasta oo lugta ah, iyo guud ahaanba waxtar badan bay leeyihiin. Haddii aad doorbideyso badeecad gaar ah oo gaar ah oo loogu talagalay aag gaar ah, ma adkaan doonto in la helo sidoo kale.
Haddii dhibaatadaadu tahay suulashaada oo aad xiraneyso kabo daboolan, tixgeli tuubooyinka difaaca ee loogu talagalay wicitaannada, buunshadaha, iyo faraha xanuunka iyo ciddiyaha. Caga dambe ee cagtu waa mid kale oo u janjeera inuu dhibaato ku keeno xoqidda kabaha. Xaaladdan oo kale, daaweynta ugu fiican ayaa ah dhejisyo hufan. Waxaa jira kuwo waaweyn iyo kuwa yaryar oo finku uga baxaan finanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Sida lugaha loogu diyaariyo kabaha xagaaga
Suudka caruusadda, sida loo sameeyo xulashada saxda ah